Maitiro ekuona kubatana kweiyi link mu Safari | IPhone nhau
Maitiro ekuona kubatana kweiyo chinongedzo muSafari
Kana isu tiri kubhurawuza internet tichitsvaga chero ruzivo, panguva yekushanya kwedu tinowana akawanda maratidziro anotirevera kune akasiyana mawebhusaiti, mukati meiyo imwechete peji patiri kana kune mamwe mapeji ane chekuita nekutsvaga mazwi. Muzviitiko zvakawanda, zvinongedzo zvinotitumira kunongedzera uko mavara akanyorwa pairi pairi anoratidza, asi pane dzimwe nguva, uye zvichienderana nerudzi rwemapeji atinoshanyira, inogona kunge iri yekushambadzira link, inoti iwo mabheti e isu kuti tinya.Izvi zvinongedzo, pamusoro pekukonzera isu kutsamwa kwakanaka, zvinoita kuti tirasikirwe nenguva yedu, kunyanya kana tikabaya, windows uye mamwe mahwindo ekushambadzira anotanga kuvhura izvo zvinowira pasi bhurawuza. Neraki browser Safari inotipa iyo sarudzo yekuwedzera mamiriro emamiriro pazasi pebrowser kuve nechokwadi usati wabaya kana chinongedzo ichienderana neruzivo rwatiri kutsvaga. Mune mamwe mabhurawuza iyi sarudzo inogoneswa nekutadza, asi mubrowser reApple tinofanirwa kutsvaga zvishoma kusvikira tachiwana.
Kuti tiishandise tinofanirwa kuenda kuDisplay uye sarudza Show status bar. Nenzira iyi, pese patinofamba pamusoro pekubatanidza, chinongedzo ichi chinoratidzwa pazasi pebrowser.n Safari yeIOS, tinogona zvakare kuwana ruzivo urwu asi neimwe nzira yakaoma uye isinganyanyi kukurumidza.
Kune izvi isu tinofanirwa Dhinda uye bata munwe wako pane iyi link irimubvunzo kusvikira menyu yaonekwa umo URL yekuenda icharatidzwa uye mune iyo Safari inotipa sarudzo dzinoverengeka senge Vhura, Vhura mune itsva tabu, Wedzera pane kuverenga runyorwa kana Kopa. Nenzira iyi tinogona kumbotarisa URL tisati tadhinda pairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona kubatana kweiyo chinongedzo muSafari
Vaongorori havavimbe netariro yaApple
Iyo 4-inch iPhone inogona kunzi iyo iPhone 5e